Ọrụ Inshọransị Ere na mgbazinye na Realtyww Info
nlele Ọrụ Inshọransị Bipụtara 10 months ago
Ebiputara site na vigattin
nlele Ọrụ Inshọransị Bipụtara 3 years ago
Inshọransị bụ ụzọ isi chebe onwe gị pụọ na ụkọ ego. Ọ bụ otu ụdị njikwa ihe dịkarịsịrị eji eji ya eme ihe megide ọghọm nke ọdịda, ọghọm na - enweghị isi. Whichlọ ọrụ nke na-eweta mkpuchi ka amara dị ka onye na-eweta mkpuchi, ụlọ ọrụ inshọransị, ma ọ bụ ndị na-eweta mkpuchi. Onye ma ọ bụ ihe na-azụta mkpuchi nwere amara dị ka onye inshọransị ma ọ bụ onye nwere iwu. Azụmaahịa inshọransị metụtara nke ịnshọransị echee na ọ ga-akwụ ụgwọ dị obere n'ụdị ịkwụ ụgwọ maka onye mkpuchi ahụ na nkwa nke onye mkpuchi mkpuchi iji kwụọ onye mkpuchi ahụ ụgwọ ma ọ bụrụ na mfu ahụ ekpuchighị ya. Mfu ahụ nwere ike ịbụ ma ọ bụ ghara ịbụ nke ego, mana ọ ga-adịrịrị ka ọnyelata ya na usoro ego, ma ọ ga-agụnyerịrị ihe nke mkpuchi ahụ nwere mmasị na-enweghị ike nke ejiri n'aka, ihe, ma ọ bụ mmekọrịta mbụ. Ndị inshọransị na-enweta nkwekọrịta, akpọrọ iwu mkpuchi, nke na-akọwapụta ọnọdụ na ọnọdụ ndị aga-eji kwụọ ụgwọ inshọransị. A na-akpọ ego ole onye mkpuchi ahụ nyere onye mkpuchi ya maka mkpuchi nke ewepụtara na iwu mkpuchi mkpuchi ka ana-akpọ ego. Ọ bụrụ na ahụrụ inshọransị ahụ furu efu nke mkpuchi mkpuchi ahụ nwere ike kpuchie ya, onye inshọransị nyefere onye amụma mkpuchi maka nhazi ya site na onye na-azọ ọkwa.